Ree Bitcoin maka Kaadị Onyinye Barnes & Noble | Paxful
Ree Bitcoin jiri Kaadị Onyinye Barnes & Noble
Nweta ụgwọ site na mbufe ego n’ụlọ akụ, obere akpa ego n'ịntanetị, kaadị onyinye yana usoro ọkwụkwụụgwọ ndị ọzọ karịrị 350.
Biko chere ka anyị ga-enweta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kacha mma maka gị.
Resi Sell To
Nara ego gị site na
Ọnụahịa otu Bitcoin
Otu esi ere Bitcoin na Paxful
Ọ dị mfe ugbu a ịre Bitcoin dị ka òreè Paxful. Ị nwere nnwere onwe ịtinye ọnụego nke gị, yana kwa okomoko karịrị usoro ọkwụkwụụgwọ 300 iji kwụọ ụgwọ maka Bitcoin ị na-ere. Dị ka Paxful bụ ahịa isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ , ị nwere ike ree Bitcoin gị ozugbo nye ndị ọrụ kariri nde 3 n'ụwa niile. Ihe ikpo okwu anyị na eme ka ọ dị mfe maka ndị mbido na ndị agha lagoro iji nweta uru.
Iji ree Bitcoin ozugbo, mepe akaụntụ Paxful ma ọ bụ banye aha na nke dị bụ adi. Ozugbo ị banyere aha, naanị soro nzọụkwụ ndị a:
Tinye ihe ịchọrọ – Họrọ usoro ọkwụkwụụgwọ nke ịchọrọ na ọnụọgụgụ kachasị nke Bitcoin ị dị njikere ire. Ị nwekwara ike igosi ọnọdụ gị na ego ịchọrọ. Ozugbo ịmechara, pịa Chọọ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịaỊ ga ahụ ndepụta nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa dị mkpa ịhọrọ site na ..
Nyochaa ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa – Tupu ịhọrọ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa , hụ na ị ga enyocha ihe niile dị mkpa gbasara ozuu, gụnyere mana abughị nani aha ha, ọkwa nkwenye, na ọnụego kwa Bitcoin. Ozugbo ịchọtara onyinye dị mma, pịa Ree. Ọ gaghị emeghe azụmaahịa ma, mana ọ ga eduzi gị site na Iwu na Ntuziaka nke onye zụrụ ya setịpụrụ.
Bido azụmaahịa – Ọ bụrụ na afọ juru gị na usoro ozụzụ ya, tinye ọnụọgụgụ ị dị njikere maka ya wee pịa Ree Ugbu a. Nke a ga emepe mkparịtaụka ndụ azụmaahịa ma buba Bitcoin gị na ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị. Jiri nlezianya gụọ ntuziaka ndị ahụ, ma soro ha. Ozugbo ọzuu gụsịrị njedebe nke azụmaahịa ahụ ma ịnata ịkwụ ụgwọ ahụ, ịnwere ike ịhapụ Bitcoin. Ị nwere ike ibudata akwụkwọ akwụmụgwọ ọha na eze mgbe ahia ahụ gasịrị.
Hapụ nzaghachi - Mgbe i rere Bitcoin gị nke ọma, echefula ịnye onyeòtù azụmaahịa nzaghachiozi . Nke a dị mkpa maka platfọm anyị dịka ọ na enyere aka iwulite aha onye ọrụ.
Maka ozi ndị ọzọ, lee nkọwapụta vidiyo zuru ezu banyere otu esi ere Bitcoin ngwa ngwa. Ị nwekwara ike ịmepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ịre Bitcoin site na isoro ntuziaka anyị na imepụta onyinye na Paxful .
Ebe ahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ ke Paxful dị mfe iji, ejiri ego edebere ruo na azụchaa ahịa chekwaa ya, ma nwee ike ịnweta ya gburugburu ụwa. Malite ahịa taa!
Ásụ̀sụ̀ Ìgbò (ig)
FAQ & Ebe Ẹnyemáká
Akpa ego Paxful
Màkà Azụmaahịa Gi
Obere Ulọahịa Bitcoin a na ahu anya
Maka Obodo Gi
Programụ Dị N'ọgbọ Paxful
Programụ Gbakwụnye Nke Paxful
Zụta Ebe ọ bụla
Zuta Bitcoin na USA
Zuta Bitcoin na Naịjirịa
Zuta Bitcoin na China
Zuta Bitcoin na India
Zuta Bitcoin na Russia
Igwe Azụmahịa Telegram
Mgwa Mgbakọ Bitcoin
Ọnụahịa Isi n'otu Ọgbọ fere n'otu Ọgbọ Ahịa
Maapụ ATM Bitcoin
Gịnị dị ọhụrụ
Ejiri Bitcoin ruo
Iwu mgbaso na Ọnọdụ
Iwu nke Ọrụ Stablecoin
Iwu nke Ọrụ Nweta Paxful
Iwu Bug Bounty
“PAXFUL” bụ ụghalaahia edenyere nke Paxful, Inc. Copyright © 2021 Paxful, Inc. Ikike Niile Echekwabara. : Paxful Inc. enweghị njikọ na MoneyGram, Western Union, Payoneer, WorldRemit, Paxum, Paypal, Amazon, OkPay, Payza, Walmart, Reloadit, Ego zuru oke, WebMoney, Google Wallet, BlueBird, Serve, Square Cash, NetSpend, Chase QuickPay , Skrill, Vanilla, MyVanilla, OneVanilla, Neteller, Venmo, Apple, ChimpChange ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla ọzọ. Anyị anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara ịkwado ma ọ bụ ịkwado ọrụ ndị a. Ederede aha ha na akara ụghalaahịa ha nwe naanị ha. Adreesị nzipu ozi gọọmentị: 3422 Old Capitol Trail, PMB 989, Wilmington DE 19808